PageMaker7.0 ပြဿနာပါ — MYSTERY ZILLION
February 2009 edited February 2009 in Help Desk
ကျွန်တော် computer မှာ.servic pack2(Black XP6 Ultimate) တင်ထားပါတယ်..
အခုဗျာ...PageMaker 7.0 ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်း အောက်ကစာတန်းပါတဲ့ box ပဲတက်တက်လာနေတယ်..
ဖြုတ်ချပြီး Install ပြန်လုပ်တော့လည်း ဒီအတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်..ကျန်တဲ့ဟာတွေဖွင့်တာတော့အကုန်ရပါတယ်..PageMaker တစ်ခုထဲဖြစ်နေတာပါ
" Adobe PageMaker for Windows application file has encounteredaproblem and need to close.We are sorry for the inconvenience."
အလယ်လောက်မှာ ပြဿနာ ကို Microsoft ကိုပြောပါဆိုပြီးဒီလိုပါသေးတယ်..
နောက်တစ်ခုက..ကျွန်တော်စက်က Servic pack2ကို Black XP ပြန်အုပ်ထားတဲ့ဟာလားမသိပါဘူးဗျာ
ဝယ်ကတည်းကတင်ပေးလိုက်တာ..အစောပိုင်းတုန်းက PageMaker ရပြီး အခုမှမရတော့တာပါ
နောက်တစ်ချက်က Admin Password လည်းပေးလို့မရဘူး..user account ပဲလုပ်လို့ရတယ်..:O
geolsky wrote: »
အဲ့သည့် ရှေးဟောင်းပစ္စည်းကို အခုထက်ထိသုံးနေတုံးပဲလား။ Adobe ကတောင် နောက်ပိုင်း Support မလုပ်တော့ဘူးနော်။ နောက်ကြာလေကြာလေ အဆင်မပြေလေဖြစ်လာမယ်။ တစ်ခြားဟာ ပြောင်းသုံးပါလား။ ဥပမာ- Publisher လိုဟာမျိုးပေါ့။ PageMaker နဲ့ အမြင်ပိုင်းလည်း သိပ်ကွာတယ်မထင်ပါဘူး။ စာအုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင် တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ Adobe Product တွေထဲမှာ PageMaker လိုဟာလည်းပါတာပဲဟာ။ အဟောင်းကြီးကို ဖက်တွယ်ထားမနေပါနဲ့ဗျာ လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းပစ်လိုက်ပါလား။ (အချွန်နဲ့တော့မထားလိုက်ပြီ မကူညီတဲ့အပြင် တွန်းချတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုပြောတာ):D
ဟုတ်ကဲ့...........ကျွန်တော် အရင်ကပြောထားသလိုပါပဲ( အဲ ဘာမှ မပြောရသေးဘူးနော်..........)
စတာပါ........ Black Xp နဲ့ Pagemaker 7.0 ကမတည့်ပါဘူးခင်ဗျာ...........
ဘာကြောင့်လဲ မသိပေမယ့် ရတဲ့စက်တော့ရနေတယ်ခင်ဗျ......... တချို့စက်တွေ မှာသာ သုံးလို့မရတာပါ........... တခြား OS ပြောင်းသုံးစေချင်ပါတယ်......
Windows သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ထွက်သမျှ Service Pack ကို အမှီလိုက်တင်သုံးလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ XP က SP3 ရောက်နေပြီလေ။ ပြင်ထားတဲ့ OS တွေတော့မသုံးစေချင်ပါဘူး။ ကိုလူပျိုကြီးပြောသလိုပဲ Adobe က Page Maker ကို7နဲ့ရပ်လိုက်ပါပြီ။ InDesign နဲ့ဆက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ သုံးလက်စ PM7 ကိုလည်းဆက်သုံးနေရင်းက InDesign ကိုလည်းစမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ။:)
ကျွန်တော်  computer မှာ.servic pack2(Black XP6 Ultimate) တင်ထားပါတယ်..အခုဗျာ...PageMaker 7.0 ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်း အောက်ကစာတန်း ပါတဲ့ box ပဲတက်တက်လာနေတယ်..ဖြုတ်ချပြီး Install ပြန်လုပ်တော့လည်း ဒီအတိုင်းဖြစ်နေ ပါတယ်..ကျန်တဲ့ဟာတွေဖွင့်တာတော့အကုန်ရပါတယ်..PageMaker တစ်ခုထဲဖြစ်နေတာပါ
အဲ့ဒီအတွက်ကို Pagemaker7ကို ဖြုတ်ချလိုက်ပါ။ ပြန်တင်တဲ့အခါမှာ Installation Path ကိုပြောင်းပြီးတင်ကြည့်ပါလား။ ဆိုလိုချင်တာက ပုံမှန် install ဆိုရင်
"C:\_Program Files\_Adobe\_PageMaker7အဲ့ဒီအောက်ကို install လုပ်မယ်ဆိုပြီး သူ့ default အတိုင်းသွားတာကို Manual Install လုပ်လိုက်ပါ။ Install မလုပ်ခင်ကတည်းက ကိုယ်ဖာသာကိုယ် flolder တစ်ခုဆောက်ထားလိုက်ပေါ့။ e. g. C:\_pagemaker ပြီးရင် အဲ့ဒီ Path အတိုင်း install လုပ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေပါမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျနော် ကြုံဖူးလို့ အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်တာတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက..ကျွန်တော်စက်က Servic pack2ကို Black XP ပြန်အုပ်ထားတဲ့ ဟာလားမသိပါဘူးဗျာဝယ်ကတည်းကတင်ပေးလိုက်တာ..အစောပိုင်းတုန်းက PageMaker ရပြီး အခုမှမရတော့တာပါ နောက်တစ်ချက်က Admin Password လည်းပေးလို့မရဘူး..user account ပဲလုပ်လို့ရတယ်.
အဲ့ဒါကတော့ Black XP တချို့ အချပ်တွေမှာဖြစ်တယ်။ Registry မှာ အောက်က ပေးတဲ့ဟာလေးကို တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစမ်းကြည့်ပါလား။ ကျနော်တို့ SP2 ရိုးရိုးတွေမှာတော့ အဲ့ဒီ Registry String မပါလို့ သေချာမပြောပြတော့ဘူး။ စမ်းကြည့်ပါဦး
[B][URL="http://www.pctools.com/guides/help/registry-settings.php#system_key"]System Key:[/URL][/B] [HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_Winlogon]
[B][URL="http://www.pctools.com/guides/help/registry-settings.php#value_name"]Value Name:[/URL][/B] ForceAutoLogon
[B][URL="http://www.pctools.com/guides/help/registry-settings.php#data_type"]Data Type:[/URL][/B] REG_SZ (String Value)
[B][URL="http://www.pctools.com/guides/help/registry-settings.php#value_data"]Value Data:[/URL][/B] (0 = disabled, 1 = enabled)
အနီ၀ိုင်းထားတဲ့နေရာမှာ0နဲ့ 1 ပဲပြောင်းကြည့်ပါ။ ပြီးရင် Restart ချကြည့်ပါ။
Page Maker အဆင်မပြေတာကိုဘဲ ပြောပါမယ် .. User Password က အဆင်ပြေလောက်ပြီ လို့ထင်ပါတယ် .. ဟုတ်ကဲ့ တစ်ချို့ သော Windows version တွေဟာ PM နဲ့အဆင်မပြေ ပါဘူး ဒါကလည်း အပြစ်ပြောလို့မရပါဘူး .. သုံးတဲ့သူကလည်း ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကို ရတဲ့ဟာလေးဘဲ သုံးနေရတာကို .. တကယ့်လို့ .. Install version နဲ့ အဆင်မပြေရင် .. Portable နဲ့ ဘဲ သုံးပါလို့ အကြံပေးပါရစေ .. ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးပါတယ် .. အရင်တုန်းကရနေပြီး နောက်မှ ဘယ် ဟာတွေနဲ့ သွားပြီးငြိမ့်နေတာလဲ မသိဘူး .. အဲဒီ ပြထားတဲ့ Error ကြီးတက်ပြီး ပြန်ပိတ်သွားပါတယ် ဘယ်လောက်ဘဲ .. ပြန်ဖြုတ်ပြီး ပြန်တင်တင် .. မရဘူးဆို မရဘူးခင်ဗျ .. ကျွန်တော်လည်း တော် တော် စားခဲ့ပါတယ် .. နောက်မှ .. Install version ကို ဖြုတ်ပြီး .. Portable နဲ့ပြန်တင်ပေးပြီး Run ရင် အဆင်ပြေပါတယ် .. ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့စက်မှာ 6.5 ကို Portable အနေနဲ့သုံးနေပါတယ် .. အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ် .. (7.0) က 6.5 ထက် အရမ်းလေးတယ် လို့ လည်း ထင်ပါတယ် .. Tool Bar မပါတာကလွဲရင် အားလုံးနီးပါဟာ အဆင်ပြေပါတယ် .. ပေါ့လည်း အရမ်းပေါ့ပါတယ် .. Googling လုပ်ပြီး ရှာကြည့်ပါ အဆင်မပြေရင် ကျွန်တော့်ဆီကို မေးလ်ဘဲဖြစ်ဖြစ် .. PM ဘဲ ဖြစ်ဖြစ်ပို့ပေးပါ .. တင်ပေးပါ့မယ် .. (လောလောဆယ်ဘယ်မှာမှ မတင်ထားရသေးလို့ပါ) .. အဆင်ပြေပါစေ..
ကျွန်တော်လည်း computer ကိုအခုမှ ထဲထဲဝင်ဝင်စလေ့လာတော့ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပဲဗျာ..
အခုလည်း..sp2 ကို vista အုပ်ထားတဲ့အခွေတွေမှာ Admin နဲ့ User account ခွဲမရတဲ့အကြောင်းဝိုင်းဝန်း
အဆင်ပြေမယ့် OS ပြောင်းသုံးစေလိုပါတယ်။ ရေရှည်အတွက်ပါ။ အဲဒီလို ဟိုဟာကို ဒီဟာနဲ့အုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေမှာ ပြသနာကရှင်းမရအောင်များလာတတ်တယ်။ ကိုယ်သိတာက လက်ရှိသုံးလိုက်လို့ အဆင်မပြေတာလေးတွေကိုပဲသိသေးတာလေ။ တခြားအဆင်မပြေဖြစ်မယ့်ကောင်တွေ ရှိနိုင်သေးတယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် အစစ်ကို၀ယ်သုံးဗျာ။ ပြီးရင်ကျွန်တော့်လည်းငှားဦး။:D